MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: အစိုးရတပ်မ (၈၈)မှ စစ်သားတစ်ဦး ကလေး ၃ ယောက်မိခင်တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်
အစိုးရတပ်မ (၈၈)မှ စစ်သားတစ်ဦး ကလေး ၃ ယောက်မိခင်တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်
ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ်တွင် မြန်မာအစိုးရ တပ်မ ၈၈ စစ်သား တစ်ဦးမှ ခဆန် (Hka San) ကျေးရွာမှ ကလေး ၃ ယောက် မိခင် အမျိုး သမီး တစ်ဦးအား အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
အင်အား ၅၀ ခန့်ရှိသော အစိုးရတပ်ဖွဲ့သည် ကားမိုင်း နှင့် မိုးကောင်း ကြားရှိ ခဆန် (Hka San) ကျေးရွာတွင် ၀င်ရောက်လာချိန် အောက်တို ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့တွင် ထိုအမျိုးသမီးကို အဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများပြောသည်။
ယခုချိန် ကားမိုင်းနယ်မြေတွင် လှုပ်ရှားနေသော အစိုးရတပ်ဖွဲ့များသည် ကချင်အမျိုးသမီးများကို အဓမ္မပြုကျင့်ခြင်း သာမက ဒေသခံ ယောင်္ကျား မိန်းကလေး မရွေး စစ်ဆေးမြေးမြန်းပြီး နှိပ်စက်မှုများ၊ ကြိုက်ရာပစ္စည်း လုယက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရသည်။
ထိုသို့ အစိုးရစစ်သားများဖမ်းဆီးနှိပ်စက်မှု အမျိုးမျိုးကြောင့် ခဆန် နှင့် အနီးတ၀ိုက်မှ ကချင်ကျေးရွာပြည်သူများသည် ရွာပြင်သို့ထွက်ရန် စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေပြီး ယခုချိန် ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်၍ သစ်သီးဝလံနှင့် လယ်ယာ စပါး ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်သော်လည်း စပါးများရိတ်သိမ်းဖို့သွားရန် ကြောက်နေကြောင်း သိရသည်။
အစိုးရကျောင်းသူ/သားများအတွက်လည်း အောက်တိုဘာ သီတင်းကျွတ် ကျောင်းပိတ်ပြီးနောက် နိုဝင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့မှ ကျောင်းပြန်ဖွင့်ပြီဖြစ် သော်လည်း အစိုးရစစ်တပ်ဖွဲ့များ လှုပ်ရှားနေခြင်းကြောင့် ခဆန် (Hka San) ကျေးရွာနှင့် အနီးတ၀ိုက် ကျေးရွာများတွင် မူလတန်းကျောင်းများ မဖွင့်နိုင်သေးကြောင်း ဒေသခံများမှသိရသည်။
ယခုလိုရွာထဲသို့ အစိုးရတပ်ဖွဲ့များဝင်ရောက်လာသောကြောင့် ၎င်းကျေး ရွာဒေသခံများအားလုံးသည် နီးစပ်ရာ ကျေးရွာများဖြစ်သော နားဟိုင် ခေါ် နမ်ရှဲန် (Nam Sheng) ရွာသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာပြီး ထိုကျေးရွာရှိ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွင် ခိုလုံနေကြောင်း ကားမိုင်းဒေသခံ တစ်ဦးပြောသည်။
နားဟိုင်ရွာတွင် ထွက်ပြေးရောက်ရှိနေသော ဒုက္ခသည်များသည် အိမ်ခြေ ၅၇ မှ လူဦးရေ ၃၀၀ ကျော်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယခုချိန် ၎င်းတို့အား ခရစ်ယာန်အသင်းတော်များမှ အစားအသောက်နှင့် နေစရာ နေရာများကို စီစဉ်ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
အခက်ခဲများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် UN ကူညီရေးအဖွဲ့များထံလည်း ဆက်လက် အကူအညီ တောင်းထားကြောင်း သိရသည်။
at 11/12/2012 10:59:00 PM
မြန်မာစစ်တပ်များ အချင်းချင်း ပစ်ခတ်မှုကြောင့် (၂၀)ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရ
(Lachid Kachin) (Myutsawkasa) ယခုရက်ပိုင်း မြန်မာစစ်တပ်၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၄၊ဇွန်လိုင် (၁၁)ရက်နေ့ က ရှမ်းပြည်မြောက်ပ...
▼ November 11 - November 18 (35)
ကျားထိန်းသိမ်းရေး ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု ရပ်ဆိုင်းရန် သ...
Obama’s Burma visit: Strategic reasons overtake hu...
34 Kachin communities and organizations around the...
အကျဉ်းသားများဖြင့် မိုင်းရှင်းခိုင်း နေခြင်း
KIO ဌာနချုပ်အနီး အစိုးရတပ် အင်အားတိုးချဲ့
ကချင် မဟာမိတ်အဖွဲ့ သမ္မတ အိုဘားမားထံ အိတ်ဖွင့်စာပို...
GAURI HTE HKA SAN LAPRAN KAW GASAT
KIA အရပ်သားတပ်ဖွဲ့မှ အစိုးရခြေမြန်တပ်ကို မိုင်းဖြင...
ဖားကန့်လမ်းတိုက်ပွဲ ဗမာစစ်သား အကျများ
ဂေါ်ရီကျေးရွာတွင် ဗမာစစ်သား (၈) ဦးသေဆုံး
KAMAING LAM DE MYEN LAW HKRAT
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ၊ လုံးခင်းအုပ်စု ငါးမိုင်ေ...
မြန်မာစစ်တပ် ယာဉ်တန်းကို ကေအိုအေ မိုင်းခွဲတိုက်ခို...
GAURI MARE KAW MYEN (8) HKRAT
ဖားကန့် ဒေသ၌ တိုက်ပွဲများ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေ
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲကို ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပဖ...
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသ မော်ဝမ်းဗျူဟာကုန်းနှင့် လ...
လူ ၁၀ ဦး သေဆုံးသော ဦးတန်ဂွန်းနေအိမ် ဗုံးပေါက်ကွဲ...
ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်း အဆုပ်နှင့် AIDS ဝေဒနာရှင်များအတွ...
ဗမာအစိုးရစစ်တပ် လူနေရပ်ကွက်သို့ လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်
HPAKANT LAM DE LAJA LANA GASAT NGA
ဒိန်ဂျန်းတွင် တိုက်ပွဲဖြစ်။ ဗမာအစိုးရစစ်သား (၂၀)ေ...
TING YING A HPYEN LA NI SHY. ROI SAN HPE A DUP ZIN...
ကချင် နှစ်ခြင်းအဖွဲ့ချုပ်က မူးယစ် တိုက်ဖျက်ရေး တနု...
ရွှေလီ ဆွေးနွေးပွဲ နောက်ပိုင်း KIA တိုက်ပွဲများ
အစိုးရတပ်များ KIO ဋ္ဌာနချုပ်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်ရောက်ရှ...
ကားမိုင်းနှင့် ပူတာအိုလမ်း တိုက်ပွဲတွင် မြန်မာစစ်သ...
ဆွမ်ပရာဘွမ်လမ်း မိုင်တိုင် (၅၆) တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွ...
101 ZAI LADAT HPUNG NI SUMPRA BUM LAM KAW GAP
Burma: A bridge too far?
တပြည်လုံးအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကြေညာရန် UNFC ဆက်လက်တောင်း...
အစိုးရတပ်မ (၈၈)မှ စစ်သားတစ်ဦး ကလေး ၃ ယောက်မိခင်တစ...